How Many Dimes in 20 Dollars? – Answered!
घर / पैसा, सानातिना / २० डलरमा कति डाइम्स?
२० डलरमा कति डाइम्स?
1 Many २० मा कति डाइम्स छन्?
2 डाइम्स कन्भर्टर मा डलर
3.1 २. D डाइम्स तौल कति छ?
Many २० मा कति डाइम्स छन्?
प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ '२० डलरमा कति डाईम्स छन्?' यो जान्छ कि २० डलरमा २००० डाइम्स छन्!
के तपाईंसँग ठीक $ २० छैन भने नि? तपाईं कसरी थाहा पाउनुहुनेछ कि कति बराबर dimes हुन्छ? त्यो सरल छ! तपाईंको डाइम्सलाई डलरमा बदल्नको लागि हाम्रा डलरहरू डाइम्स कन्भर्टरमा प्रयोग गर्नुहोस्।
डाइम्स कन्भर्टर मा डलर
Dimes रूपान्तरण गर्न को लागी हाम्रो नि: शुल्क डलर प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको डलरलाई चाँडै डाइम्समा बदल्न। तपाईसँग कति डलर छन् टाइप गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। हामीले २० डलरमा टाइप गर्यौं जसले हामीलाई २०० डाइम्स दिन्छ। त्यो जवाफ दिन्छ कि २० डलर मा कति dimes।
अब तपाईंको पालो हो! तपाईंको कति डाइम्स टाइप गर्नुहोस् र हाम्रो डलर डाइम्स क्यालकुलेटरले तपाईंलाई बताउँछ कि तपाईंसँग कति डलर छन्। डाइम्समा डलरहरू सजिलो भयो, तपाईंसँग कति डलरहरू छन्। $ २० वा $ २००, हामी यो सबै समाधान गर्न सक्दछौं।
२. D डाइम्स तौल कति छ?
सबै dimes १ since .1965 पछि बनेको २.२2.268 ग्राम तौल ०.0.085 औन्स बराबर छ। यसको मतलब हाम्रो २०० dimes ($ २००) तौल 200 200..453.6 ग्राम छ! ग्रामको साथ परिचित छैन? 453.6 1. grams ग्राम बराबर १ पाउण्ड डाइम्स बराबर छ! त्यो धेरै dimes हो।
डाइम्स मुख्यतया तामा हुन् तर निकल द्वारा बनेको हुन्छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा, हाम्रो आधुनिक दिनहरू 91.67 १..8.33% तामा र .1965..90% निकल हुन्। यद्यपि यो सधैं यस्तै थिएन! १ 10 .200 भन्दा अघि, डाइम्स ०% चाँदी र १०% तामाको थियो। यदि तपाईंसँग २०० डाइम्स (२० डलर) छन् भने तपाईंले 20१415.82..37.78२ ग्राम तामा र। 0.917 ग्राम निकल तपाईंको हातमा समात्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं पाउन्डमा काम गर्न रुचाउनुहुन्छ भने त्यो ०.0.083१XNUMX पाउन्ड तांबे र ०.XNUMX पाउन्ड निकेल हो।
आधुनिक दिनका डाइम्स १.1.35 मिमी मोटा छन् जुन ०.0.061१200 इन्च बराबर छ। यदि हामीले जमिनबाट सुरु गरेर २०० २०० डाइमहरू राख्यौं भने, हाम्रो डाइम्स २ 270० मिमी उचाइमा पुग्नेछ। त्यो २ c सेन्टिमिटर अग्लो छ! यदि तपाईं इन्च रुचाउनुहुन्छ भने, तपाईंको २०० डाइम्स १०..27 इन्च अग्लो हुन्छ! यो प्राय: छत भन्दा अग्लो छ।
dimesडलरडाइम्स कन्भर्टरमा डलररमाइलो तथ्यdimes बारेमा रमाईलो तथ्यहरूपैसा ट्रिभियाट्रिभिया प्रश्नहरू पैसासानातिना